Ugaaska Beesha Sade oo sheegay in lagu heshiyay Ergadi Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe. – idalenews.com
Ugaaska Beesha Sade oo sheegay in lagu heshiyay Ergadi Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe.
Magaalada Kismaayo oo ay labadi bari ee ugu danbeysay ay ka tagnayd ismari waa dhanka qaybsiga ergoyinka Gobolada Jubbada hoose iyo jubbada dhexe ee doranaya Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa hada soo ifbaxaya in is afgarad laga garay.
Ugaaska Beesha Sade Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi oo u waramayay Warbaahinta Kismaayo24 ayaa waxaauu sheegay in dood dheer ka dib xalay la xaliyay qaybsiga Ergoyinka Jubbad Hoose iyo Jubbada dhexe.
Ugaas Maxamed ayaa waxaa uu intaasi ku daray in Shacabka Jubbaland ay ka go,antahay dhisida Maamul Goboleedka Jubbaland isla markana aysan marnaba diyaar u ahayn in uu shirka Jubbaland u fashil ku dhamado.
Ugaska oo aanu wax ka waydinay halka ay marayso Qaybsiga Ergoyinka Gobolka Gedo ayaa waxaa uu sheegay in Gobolka Gedo Ergoyinkiisi la qaybsaday laguna heshiyay mar hore balse waxaa ay dhibta ka tagnayd ay ahayd labadan gobol ee kale .
Ugaaska ayaa waxaa uu sheegay in Ergada Gobolka Gedo ay tahay Ergo xulan oo lagu soo xulay dhaqanki soo jireenka ahaa ee Gobolka Gedo hadana ay hal meel wada daganyihiin ayaagon isku kalson islamarkana ah dad is fahansan.
Goorma ayaa la soo dooran doonaa Madaxweynaha Maamulka Jubbaland?
Qarax xoogan oo gilgilay Magaallo ka tirsan Dalka Turkiga